Gaari & dad saarnaa, dhawaan la afduubtay oo War kusoo kordhay & Arrin laga sheegay - Awdinle Online
Gaari & dad saarnaa, dhawaan la afduubtay oo War kusoo kordhay & Arrin laga sheegay
Gaari Sida Shan qof oo dhawaan lagu afduubtay Deegaano Hoostaga Degmada Maxaas ee Gobalka Hiiraan ayaa iminka gaaray Matabaan Ka dib markii Dadkaasi ay soo daayeen Malayshiyaadkii afduubka u haystay.
Malayshiyaadka dadkaan afduubtay ayaa dalbanayay in lasiiyo Lacag diyo ah dad horey looha dilay lacagtaas oo ugu dambayn loo shubay saasna ay kusoo daayeen dadkii u afduubnaa oo ahaa dad safar ah oo aan waxba galabsan.
Wadada xiriirisa Magaalooyinka Matabaan iyo Guriceel ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa ka taagnaa xaalado colaadeed, kadib markii siyaabo kala duwan loogu dilay laba darawalihiin.
Maamulka degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan ayaan ka hadlin colaada ka jirta degaano hoostaga degmadaas, waxaana sidoo kale xusid mudan in dhowr jeer ay ka dhaceen dagaal Beeleedyo degaano hoostaga degmada Matabaan.
Previous articleAfhayeenka Al-Shabaab oo amray in la dilo mas’uul ka tirsan Maamulka Puntland
Next articleCiidamada AMISOM oo ishor-istaag ku sameeyay Guddoomiyaha degmada Beledweye